Abdel Fattah Burhan: waa kumaa ninka la wareegay talada dalka Suudaan?
Wafti Iskugu Jira Wasiiro Iyo Saraakiil Ciidanka Qaranka Ka Tirsan Oo Jabuuti Gaadhay
Salaadiintii Muqdisho Ka Taageeray Somaliland Ee Beesha Direed Waxaanu Leenahay…Ugaas Cabdirisaaq
Daawo Muuqalka”Xeer Awood Siinaya Bangiga Dhexe Iyo Ciidanka Booliska Oo Golaha Wakiiladu Ansixiyeen
Daawo dab Gubay Qaybo kamida Suuqa Digiga iska Eeg xalay saqdii Dhexe
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Maxamed Kaahin ayaa mumnuucay in la qabto mooshinno xilka lagaga qaadaayo maayirada
Gabadh Ay Walaalo Yihiin Madaxweyne Obama Oo Hargeysa Soo Gaadhey
Askari bashiir Cumar oo 41 kun oo doolar Hellay Laakiin Dibi Ugu Celiyay Qofkii lahaa
Wasiirka maaliyadda Kenya oo la xiray
Wargeyska The EastAfrican "Somaliland Waxay Rabtaa Aqoonsi Xataa Haddii aanay Muqdisho Aqlabayn"
Hoggaamiyaha cusub ee golaha militariga Suudaan Sareeya gaas Abdel Fattah Abdelrahman Burhan ayaa sheegay inuusan ku xirneen urur siysadeed ama hay’ad gaar ah.
Sareeya gaas Abdel Fattah Abdelrahman Burhan ayaa noqday hoggaamiyihi seddexaad oo hoggaaminta golaha militariga ku meel gaarka ee Suudaan hoggaamiyo tani iyo marki xilka laga tuuray madaxweynihi hore Cumar Xasan al-Bashiir.
Sida ay qortay wakaladda wararka ee Anadolu Agency Sareeya Gaas Abdel Fattah Abdelrahman Burhan wuxuu dhashay sanadka 1960-kii wuxuuna ku dhashay tuulada Kundato oo ku taallo wabiga Niil. Burhaan oo ah sargaal militari isla-markaana in badan siyaasadda ku soo jiray wuxuu hadda si ku meel gaar ah u hayaa guddoomiyaha golaha militariga Suudaan oo talada kala wareegay madaxweynihi hore Cumar Xasan al-Bashiir.
Sarreeya gaas Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, oo 60 jir ah wuxuu ka mid ahaa ciidamada ilaalada xuddudaha Suudaan kaddibna waxaa loo magacaabay madaxa arrimaha militariga ee Safaaradda Suudaan ay ku leedahay dalka Shiinaha.
ntaa ka gadal wuxuu Burhaan noqday taliyaha ciidamada ilaalada xudduudda Suudaan, wuxuuna markiba u sii dallacy taliyaha ciidamada dhulka dalka Suudaan.
Wuxuuna tababara militari uu ka soo noqday dugsiga tababarka ciidamada oo ku yaalla bariga dalka Suudaan, wuxuuna taliya u soo noqday ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jiray jabhadda SPLA ee ka dagaallameysay Suudaanta Koonfureed 2011-kii xorriyadda intii aysan qaadan ka hor.
Madaxweynihi hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa la kulmay mudaharaadyo xooggan oo xukunkiisa looga soo horjeeda, wuxuuna al-Bashiir uu isku shaandheyn uu ku sameeyey ciidamadiisa.
Bisha Fabraayo 26-keedi ayaa Burhaan markale loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada dhulka ee dalka Suudaan.
Waxaana xusid mudan, Burhaan inuu ka mid ahaa seddexda sargaal ee iclaamisay in al-Bashiir xilka laga tuuray.
Burhaan xilli uu hoggaaminayey ciidamada Suudaan ee ku sugan Yemen wuxuu dhawr jeer booqasho uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta.
Dad aad ugu dhaw Burhaan waxay sheegayaan inuu wax xiriir ah uu la lahayn ururrada diimaha iyo kuwa siyaasadeed midna. Waxaa kale oo ay sheegeen inuu yahay sargaalka keli ah ee ay maxkamadda dambiyda dagaalka calaamiga ay wax dacwad ah u haysanin.
Wasiirka Gaashaandhigga Cawad Ibn Cawf, oo khudabad soo jeediyey 11-ka April xilliga ay ciidamda talda Suudaan la wareegeen wuxuu sheegay iney ciidamada talada dalka Suudan la wareegay ay u billaabatay 2 sano oo dowlad ku meel gaar ah oo ay xilka soo hayn doonaan.
Hase yeeshee, Ibnu Cawf ayaa saacado kaddib xilka iska casilay isaga oo sheegay inuu xilka ku wareejinayo Burhaan kaddibna xilka la wareegay loona dhaariyey.
Burhaan waxaa uu beddelay Cawad Maxamed Axmed Bin Cawf oo ahaa wasiirka gaashaandhigga dalka Suudaan.